Isiqeshana: Inanda indawo ebalulekile kumlando, eNanda kukhona amaqhawe ongafunda ngawo. USbo Dladla ungomunye abangakusiza ufunde ngomlando wase Nanda nabalobi bomlando.I-Literary Tourism umkhakha wezokuvakasha ophathelene nabalobi bomlando obalulekile, lomkhakha ubheka ukuthi labalobi babegqugquzelwa yini ngeskhathi behlanganisa umlando, indlela ababeyihamaba. E-Nanda abaphathelene nalomkhakha kubalwa oJohn Dube no Mahatma Gandhi, izindawo ezibalulekile kwi-literary tourism, izindawo ezinjengo Ohlange Institute, Phoenix Settlement kanye nezinye.
U-Sbo Dladla uchazela umphakathi ngendawo yase Nanda nomkhakha we-Literary Tourism, ekwiyinxenye ebalulekile yomkhakha wezokuvasha endaweni yase Nanda. Ifundisana ngendawo yaseNanda, abaholi ababamba iqhaza kulendawo, ekuthuthukiseni umphakathi nokugqugquzela ukuzimela.
Omlando wase Nanda Dam, kanye nemiphakathi eyake yahlala khona
Lengxenye iqopha futhi iqokelele ndawonye izindaba ngeNanda, izindawo ezibalulekile emlanweni walendawo nabaholi abayamaniswa nazo, nezindawo ezingadumile ezinomlando kanye nalabo abangamaqhawe kodwa abangagqanyiswanga, izindaba ngabo okumele zibhalwe futhi zikhumbuleke. Lengxenye ayiqokeleli nje umlando wodwa kodwa okunye okubalulekile yizinkumbulo, ulwazi, izithombe, kanye noma yini engaba wumnikelo wanoma ngubani waseNanda nakwezinye izindawo. Izinkumbulo zingecace kahle, futhi zingahlukana zibe yihaba, kodwa konke okusakhumbuleka kubalulekile ukuthi sikudlulisele nakwabanye, ngenxa yokuthi konke kuyigugu futhi kungagqugquzela nabanye ukuthi basixoxele ngokwakwenzeka kudala.